MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Text Only Version of Facebook mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစု ချစ်သူခင်သူများနှင့် Facebook ကနေ ဒေတာမကုန်ဘဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
MPT နဲ့ ဆို Like, Comment, Share လုပ်တာတွေအပြင် Messenger မှာ စာရိုက်ပြီးစကားပြောတာနဲ့ Status တင်တာတွေအတွက်လည်း ဒေတာမကုန်ဘဲပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်လို့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ အမြဲအဆက်အသွယ်ရှိရှိ နေလိုက်ရအောင်နော်။
သုံးစွဲသူအနေဖြင့် ဓာတ်ပုံများ နှင့် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုလိုပါက နည်းလမ်း (၂)မျိုးဖြင့် အခမဲ့ ဒေတာ Free Mode မှ အခပေးဒေတာ Data Mode သို့ ပြောင်းလဲကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
(၁) “Text-only version of Facebook” ရှိ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ “See Photos” ကို နှိပ်၍ အခမဲ့ Free mode မှ အခပေး Data mode သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အသုံးပြုမှုများကို Main Balance (သို့မဟုတ်) ယခင်ဝယ်ယူထားသော ဒေတာပက်ကေချ့်မှ ကောက်ခံသွားပါမည်။
(၂) “Buy Data” ကို နှိပ်၍ Text Only Version of Facebook တွင်ဒေတာပက်ကေချ့်ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပြီး အသုံးပြုမှုများကို ဝယ်ယူလိုက်သည့် ဒေတာပက်ကေချ့်မှ ကောက်ခံသွားပါမည်။
Facebook App ၏ ညာဘက် “Menu” မှ MPT data packs (သို့မဟုတ်) ဘယ်ဘက်အပေါ် ထောင့်တွင် ရှိသော “persistent entry point”ကို နှိပ်ပါ။
ဝယ်ယူလိုသော data packs ကို ရွေးချယ်ပါ။
1. All MPT GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများအားလုံး အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်ပါသည်။
2. လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသည့် သုံးစွဲသူများ၊ CDMA၊ WTTX နှင့် Roaming အသုံးပြုသူများသည် ဤဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
3. Text-only version of Facebook ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် လျှောက်ထားရယူရန် မလိုအပ်ပါ။
4. ဝန်ဆောင်မှုကို ဖုန်းဘေမရှိသည် ဖြစ်စေကာမူ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် (ဖုန်း setting ထဲတွင် data ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်)။
5. Facebook for android app (သို့) FB lite app (သို့) mobile web browser (Google Chrome/ Opera Mini/ Safari) မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
6. Facebook (Android app) ဗားရှင်းအားလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း နောက်ဆုံးဗားရှင်း ရယူထားရန် အကြံပြုလိုပါတယ်။
7. Free mode တွင် သုံးစွဲသူများသည် ပို့စ်များကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ ပိုစ့််အသစ်များတင်ခြင်း၊ ပုံများတင်ခြင်း၊ messenger application အသုံးပြုခြင်း၊ like/ Comment/ Share အစရှိတဲ့Function တွေကို အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
8. Data mode တွင် ပုံမှန် Facebook အသုံးပြုသကဲ့သို့ features များအားလုံးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရယူထားသော SWE/ Shal/ Shwe နှုန်းထားများအတိုင်း (သို့) ပက်ကေ့ချ် (သို့) Bonus များမှ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
9. ဓာတ်ပုံများ နှင့် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုလိုပါက ဒေတာ ပက်ကေချ့်များကို အခြားနည်းလမ်း များ ဖြင့်ဖြစ်စေ Text-only version of Facebook မှ ဖြစ်စေ ဝယ်ယူ၍ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
10. ဝယ်ယူထားသော ဒေတာပက်ကေချ့် နှင့် “Text-only version of Facebook မှ ဝယ်ယူလိုက်သော ဒေတာပက်ကေချ့် တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် သက်တမ်း နည်းသော ဒေတာပက်ကေချ့်မှ အရင်ဖြတ်တောက်သွားပါမည်။
11. MPT Digital Store တွင် ဖော်ပြထားသော Data Pack များကို အခမဲ့ mode အသုံးပြုချိန်တွင် ဖြစ်စေ၊ အခပေး mode အသုံးပြုချိန်တွင်ဖြစ်စေ မည်သည့် အချိန်တွင် မဆို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
12. MPT Digital Store ကို ဝင်ရောက်လိုပါက Facebook App ၏ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်တွင်ရှိသော “Menu” အောက်ရှိ “MPT data packs” မှဖြစ်စေ၊ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ “Persistent entry point” မှဖြစ်စေ နည်းလမ်း ၂မျိုးဖြင့် ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
၁။ Text-only version of Facebook ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ?
Text-only version of Facebook ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာ MPT ရဲ့သုံးစွဲသူတွေအတွက် ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ ပို့စ်များကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ ပိုစ့််အသစ်များတင်ခြင်း၊ ပုံများတင်ခြင်း၊ messenger application အသုံးပြုခြင်း၊ like/ Comment/ Share အစရှိတဲ့Function တွေကို အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
၂။ Text-only version of Facebook ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ?
Text-only version of Facebook ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် လျှောက်ထားရယူရန် မလိုအပ်ပါ။ MPT ဆင်းကတ်ဖြင့် မိုဘိုင်းဒေတာ (အင်တာနက်) ကိုဖွင့်ပြီး Mobile web browser တွင် free.facebook.com မှတစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ Facebook app မှတစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း Text-only version of Facebook ဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့ ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Facebook (Android app) ဗားရှင်းအားလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း နောက်ဆုံးဗားရှင်း ရယူထားဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
၃။ Free (သို့) Data mode settings page ကိုဘယ်လိုရယူရမလဲ?
Free (သို့) Data mode settings page ကိုရယူရန် အပေါ် tab bar ၏ ညာဘက်ထောင့်ရှိ ဘား၃ခုပါ menu icon မှတစ်ဆင့် “MPT Data Usage” ကိုနှိပ်ပါ။
၄။ Free (သို့) Data mode ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ?
Free mode ကိုလက်ရှိအသုံးပြုနေပြီး Data mode ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုပါက အပေါ်ညာဘက်ထောင့်ရှိ See Photos ကိုနှိပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ပုံများ/ဗွီဒီယိုများမှတစ်ဆင့် Use Data ကိုနှိပ်၍သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Data mode ကိုလက်ရှိအသုံးပြုနေပြီး Free mode ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုပါက အပေါ်ညာဘက်ထောင့်ရှိ Go To Free ကိုနှိပ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၅။ Text-only version of Facebook ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သော Facebook version ကို မရယူချင်ပါဘူး။ ဘာလုပ်ရမလဲ?
Text-only version of Facebook ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးရန်ဖိတ်ခေါ်သော ကနဉီးစာမျက်နှာတွင် No Thanks ကိုနှိပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ Free (သို့) Data mode settings တွင် Turn Off Modes ဖွင့်၍သော်လည်းကောင်း ဤ version ကိုပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ပယ်ဖျက်ထားပါက Text-only version of Facebook ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုနိုင်တော့မည်မဟုတ်ဘဲ ဒေတာဖြင့်သာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ No Thanks ကိုမှားနှိပ်လိုက်မိပါတယ်။ Text-only version of Facebook ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သော Facebook version ကို ဘယ်လိုပြန်ရအောင်လုပ်ရမလဲ?
ပထမဆုံးအနေနဲ့ အပေါ် tab bar ၏ ညာဘက်ထောင့်ရှိ ဘား၃ခုပါ menu icon မှတစ်ဆင့် “MPT Data Usage” ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် USE FACEBOOK FOR FREE ကိုနှိပ်ပြီး text-only version of Facebook ဝန်ဆောင်မှုကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။
၇။ အစီအစဉ်ကို ဘယ်သူတွေရယူအသုံးပြုနိုင်မှာလဲ?
Facebook account ရှိသော MPT GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများအားလုံး အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ Facebook for android app (သို့) FB lite app (သို့) mobile web browser (Google Chrome/ Opera Mini/ Safari) မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၈။ မည်သည့် mobile brower တွေကတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့ရမှာလဲ?
Google Chrome, Opera Mini နှင့် Safari အစရှိသည့် mobile brower တွေမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၉။ မည်သည့် Facebook version မှာ အသုံးပြုလို့ရမှာလဲ?
မည်သည့် Facebook ဗားရှင်း (Android App) ဖြင့်မဆို Facebook Flex ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း နောက်ဆုံးဗားရှင်း ရယူထားဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ Mobile web browser မှတစ်ဆင့်လည်း Text-only version of Facebook ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်သော ဤ Version ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ Go To Free ကိုနှိပ်လိုက်တာ ပုံနဲ့ video တွေပျောက်သွားတယ်။ ဘာလို့လဲ?
Go To Free နှိပ်၍ Facebook Flex ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရာတွင် ပို့စ်များကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ ပိုစ့််အသစ်များတင်ခြင်း၊ ပုံများတင်ခြင်း၊ messenger application အသုံးပြုခြင်း၊ like/ Comment/ Share အစရှိတဲ့Function တွေကို အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယိုများ ကြည့်ရှုလိုပါက See Photos သို့ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပြီး ပုံမှန်ရယူထားသော SWE/ Shal/ Shwe နှုန်းထားများအတိုင်း (သို့) ပက်ကေ့ချ် (သို့) Bonus များမှ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်ငွေမရှိတဲ့ အချိန်မှာလည်း Text-only version of Facebook ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်မှာလား?
ဟုတ်ကဲ့။ ဝန်ဆောင်မှုကို ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်ငွေမရှိသည် ဖြစ်စေကာမူ အခမဲ့ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်း setting ထဲတွင် data ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။
၁၂။ ပုံတွေကိုကြည့်ဖို့၊ တင်ဖို့၊ share ဖို့ ဒေတာသုံးရမှာပါလား?
ပုံတွေကိုကြည့်ရန် ဒေတာသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော် ပုံများတင်ရန် (သို့) သူငယ်ချင်း၏ စာနှင့်တွဲလျက်ပုံများကို share ရန် ဒေတာသုံးဖို့မလိုအပ်ပါ။
၁၃။ ဗွီဒီယိုတွေကိုကြည့်ဖို့၊ တင်ဖို့၊ share ဖို့ ဒေတာသုံးရမှာပါလား?
ဗွီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရန် (သို့) တင်ရန် ဒေတာသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော် သူငယ်ချင်း၏ စာနှင့်တွဲလျက်ဗွီဒီယိုများကို share ရန် ဒေတာသုံးဖို့မလိုအပ်ပါ။
၁၄။ Facebook မှ link တွေကိုနှိပ်လိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ?
Facebook မှ link တွေကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ပြင်ပ website များကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန် ဒေတာအသုံးပြု/မပြု သတိပေးချက် ရရှိပါလိမ့်မယ်။
၁၅။ Facebook app ကို အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်မှာလား?
မရယူနိုင်ပါ။ Facebook app ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါက ဒေတာနှုန်းထားများအတိုင်း ကျသင့်မှာပါ။ Mobile web browser မှတစ်ဆင့် Text-only version of Facebook ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်သော ဤ Version ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၁၆။ Go To Free mode လည်းပြောင်းထားပါတယ်။ Facebook သုံးတာ ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်ငွေ ထဲက ဖြတ်သွားပါတယ်။ ဘာလို့လဲ?
Text-only version of Facebook ကို အသုံးပြုနေချိန်တွင် ဖုန်းထဲရှိနောက်ခံ Background app တွေနဲ့ update settings တွေကို ဖွင့်ထားခြင်းက ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်ငွေထဲမှ ကျသင့်နိုင်ပါတယ်။
၁။ Upsell in “Text only version of Facebook” ဆိုတာ ဘာလဲ။
Upsell ဆိုတာ MPT ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေအတွက် “Text-only version of Facebook” ပေါ်တွင် ဓာတ်ပုံများ (သို့မဟုတ်) ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုရန်အတွက် ဒေတာပက်ကေချ့်ကို ဝယ်ယူကြည့်ရှုနိင်မယ့် Feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂။ “Text-only version of Facebook” အသုံးပြုစဉ် ဓာတ်ပုံများ (သို့မဟုတ်) ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုလိုပါက ဒေတာပက်ကေချ့်ကို ဘယ်လိုဝယ်ယူရပါမလဲ။
“Text-only version of Facebook” အသုံးပြုစဉ် ဓာတ်ပုံများ (သို့မဟုတ်) ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုလိုပါက (သို့) အခမဲ့ mode မှ အခပေး mode သို့ ပြောင်းလဲလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ (Data pack (၂)ခု ရွေးချယ်နိုင်ရန် ပြသမည်ဖြစ်ပါသည်။)
၁။ “See Photos” ကို နှိပ်ပါ။
၂။ ဝယ်ယူမည့် Data Pack ကို ေရွးချယ်ပါ။
၃။ ဝယ်ယူရန် အတည်ပြုပါ။
၃။ အခမဲ့ ဒေတာ Mode မှ အခပေး ဒေတာ Mode ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုပြီး ဓာတ်ပုံများ နှင့် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုလိုပါတယ်။ ဘယ်လိုပြုလုပ်နိုင်ပါမလဲ။
ဓာတ်ပုံများ နှင့် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုလိုပါက အောက်ပါ နည်းလမ်း (၂)မျိုးဖြင့် အခမဲ့ ဒေတာ Mode မှ အခပေးဒေတာ Mode သို့ ပြောင်းလဲကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၁) “Text-only version of Facebook” ရှိ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ “See Photos” ကို နှိပ်၍ အခမဲ့ mode မှ အခပေး mode သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အသုံးပြုမှုများကို Main Balance (သို့မဟုတ်) ယခင်ဝယ်ယူထားသော ဒေတာပက်ကေချ့်မှ ဖြတ်တောက်ပါမည်။
၂) “Buyadata pack from MPT” ကို နှိပ်၍ ပြသထားသောဒေတာပက်ကေချ့်များမှ ရွေးချယ်ဝယ်ယူ နိုင်ပြီး အသုံးပြုမှုများကို ဝယ်ယူလိုက်သည့် ဒေတာပက်ကေချ့်မှ ဖြတ်တောက်ပါမည်။
၄။ ယခင် ဝယ်ယူထားသော Data Pack ရှိသော်လည်း “Text-only version of Facebook” ပေါ်တွင် offer ပေးထားသော Data pack ကို ထပ်မံ ဝယ်ယူအသုံးပြုချင်ပါတယ်။ ဒေတာဖြတ်တောက်မှုမှာ ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲ။
ယခင် ဝယ်ယူထားသော Data Pack နှင့် “Text-only version of Facebook”မှ Data pack တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် သက်တမ်းပိုနည်းသည့် ဒေတာပက်ကေချ့်မှ အရင် ဖြတ်တောက်သွားပါမည်။
MPT Digital Store on Facebook
၁။ “MPT Digital Store on Facebook” ဆိုတာ ဘာလဲ။
MPT Digital Store on Facebook ဆိုတာ MPT သုံးစွဲသူများအတွက် Facebook ပေါ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ဒေတာပက်ကေချ့်များကို အခမဲ့ mode အသုံးပြုစဉ်တွင် ဖြစ်စေ၊ အခပေး mode အသုံးပြုစဉ်တွင်ဖြစ်စေ စိတ်ကြိုက် ဝယ်ယူကြည့်ရှုနိုင်မယ့် Feature တခုဖြစ်ပါတယ်။
၂၊ MPT Digital Store တွင် ရှိသော ဒေတာပက်ကေချ့်များကို ဘယ်လိုဝယ်ယူရပါမလဲ။
MPT Digital Store တွင် ဒေတာပက်ကေချ့်များကို ဝယ်ယူလိုပါက Facebook App ၏ ညာဘက်တွင် ရှိသော “Menu” မှ MPT data packs ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်တွင် ရှိသော “persistent entry point” မှဖြစ်စေ အောက်ပါအတိုင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၁။ Facebook App ၏ ညာဘက် “Menu” မှ MPT data packs (သို့မဟုတ်) ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်တွင် ရှိသော “persistent entry point”ကို နှိပ်ပါ။
၂။ ဝယ်ယူလိုသော data packs ကို ရွေးချယ်ပါ။
၃။ အခပေး ဒေတာ mode ဖြင့် Facebook အသုံးပြုနေစဉ် ဒေတာ ဝယ်ယူ၍ ဆက်လက် အသုံးပြုလိုပါတယ်။ ဘယ်လို ပြုလုပ်ရပါမလဲ။
အခပေး ဒေတာ mode ဖြင့် Facebook အသုံးပြုနေစဉ် ဒေတာဝယ်ယူ၍ ဆက်လက်အသုံးပြုလိုပါက MPT Digital Store တွင် ဝယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။